त्रिदेशीय सडकखण्डमा ५२ करोड बजेट, महावुको अवस्था फेरिएला ! | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार त्रिदेशीय सडकखण्डमा ५२ करोड बजेट, महावुको अवस्था फेरिएला !
on: June 14, 2019 प्रदेश समाचार, प्रदेश-कर्णाली, मुख्य खबर
महावु पाटनको बीचमा रहेको सुन्दर ताल । तस्वीर : पंखबहादुर शाही/आर्थिक अभियान
तर अब उक्त सडकभन्दा ७९ किलोमिटर छोटो पर्ने देखिन्छ, भारतको रुपैडिया नाका हुँदै कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत, दैलेख सदरमुकाम, महावु हुँदै जुम्लादेखि चीनको सिमाना नाम्चे नाड्ला जोड्ने रणनीतिक सडक । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको भएपनि रू. १० करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यो रकम नाम्चे सिमानामै खर्च गरिएको थियो ।
उक्त सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रू. ५२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । दैलेखबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले उक्त खण्डमा हालसम्मकै ठूलो रकम विनियोजन भएको बताए । दैलेखको भविष्य उज्वल पार्न उक्त सडकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने देखिएको छ । ‘विगतका दिन कर्णाली राजमार्ग नहुँदा तोडिएको दैलेख कालिकोट र जुम्लाको मित्रता उक्त सडक सञ्जालले पुनः जोड्ने छ,’ सांसद शर्माले भने ।
महावुको अवस्था फेरिएला !
महावुदेखि कालिकोटतर्फ देखिएको त्रिशुलसहितको सुन्दर दृश्य । तस्वीर : पंखबहादुर शाही/आर्थिक अभियान
चारैतिर अग्ला र अध्याँरा लेकहरू, नजिकैको सुन्दर पाटनले महावु क्षेत्र निकै रमणीय छ । बीचमा रहेको विशाल ढुंगा र त्यसमाथि पूजा आराधना गर्नको लागि शिवलिंगको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ । तर यति रमणीय र आनन्ददायक ठाउँमा पुग्न हालसम्म कुनै सडक र बस्ने आश्रमको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको अवलोकनमा गएका गणेश मल्लले बताए ।